Sidee si ay u dhagaystaan ​​YouTube online, offline iyo software
YouTube waa mid ka mid ah website-yada ugu wanaagsan dunida in bixiyaan wax ka badan wixii user filaysaa iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in qayb ka mid ah ugu wanaagsan ee website-kan waa in ay jiraan tobanaan kun oo qalab online taas oo ka dhigi waxaa suurto gal ah user si loo hubiyo in videos aan la soo bixi oo kaliya laakiin waxaa sidoo kale daawaday halka offline hab. Waxaa kordhiyaa awooda iyo geynta ee website-ka iyo website-yada kale oo dhan waxa aad u muhiim ah in YouTube ka dhigi doontaa sida meel default ah degsado videos iyo walax kale waxaa loo arkaa mid ka mid ah website-yada ugu wanaagsan oo ugu kalsoonaan karo dunida. Waxaa sidoo kale in la xuso in website-ka uu leeyahay server aad u degdeg ah warsiinta taas oo ka dhigaysa hubiyo in content la uploaded u views sida ugu dhakhsaha badan ayaa loo waayay arrimaha oo dhan. Waxaa sida caadiga ah qaadataa daqiiqo iyo barta si ay ugala hadlaan arrinta waa in YouTube uu leeyahay oo dhan ururinta ugu dambeeyay ee filimada, muusikada iyo barnaamijyada kale ee sida waxa user xaq ka fikiri karaa. Magaca Nooca gudahood bar raadinta iyo hadhayna in website-ka sida ay u ogolaan doonaan user si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican, iyo in ku dhow 97% xaaladaha video la rabay ama natiijada la soo saaro arrin daqiiqo. Tani waxay si qoto dheer tutorial loo qoray si ay u hubiyaan in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira iyo sidoo kale helo videos ka ciyaaray in hab online iyo offline labadaba . Geedi socodka waa in kastoo aad u fudud in la raaco, laakiin weli tutorial hubaa in ay sharaxaad ka iyadoo la kaashanayo Screenshot si user marnaba helo maqlana arrintan la xiriira iyo shaqada samaysay arrin daqiiqo gudahood ka dhigi doonaa:
1. Sida loo maqli YouTube online
2. Sidee si ay u dhagaystaan ​​YouTube offline
3. Dhegayso YouTube la TunesGo
Sida loo maqli YouTube online
In kastoo habkan waa mid aad u fudud oo toos ah weli user wuxuu heli doona natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira sida Screenshot ka ayaa sidoo kale lagu soo gudahood. Si aad u hesho sida ugu fiican waxa uu ku talinayaa in dhamaan isticmaalayaasha in ay raacaan hannaanka uu soo halkan ku xusan si ay u hesho in aqoon qoto dheer oo sameyn kara hanaanka xitaa marka tutorial tan loo ma viewed:
User wuxuu u baahan yahay in ay soo booqdaan goobta ie www.youtube.com si ay u helaan bogga hore ee website-ka:
User ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in gudahood raadinta qataara magaca heesta ama video la cabudhiyay si aad u hubiso in natiijada ku soo kacay si fudud:
Natiijada ka dibna waa in la baadhi karo si loo hubiyo in madaxdii gabayga oo la xiriira ama video ah oo uu ku yaal oo markaas riixi inuu u ciyaaro. Saddex habka Talaabadan waa mid aad u fudud in la raaco iyo user mar walba helo natiijada ugu wanaagsan sida YouTube waa ugu fiican oo goobta ugu soo booqday caalamka. Tani habka Dhagaysiga YouTube videos online sidoo kale hubin doona in dadka isticmaala macluumaadka ku saabsan Uploads dhawaan iyo macluumaadka la xiriira oo ku saabsan channels ay heshiiska si aad u hesho.
Sidee si ay u dhagaystaan ​​offline YouTube (Isticmaalka software)
Habka ugu fiican ee ku raaxaystaan ​​muuqaalada YouTube marka ma jiraan wax isku xirnaanta internet waa ay hubiyaan in videos waxaa lagala soo bixi. View offline waxa kale oo hubin doona in user Khasab ma aha in ay booqdaan goobta ugu weyn oo marna uu leeyahay si ay u isticmaalaan internet-ka loogu geeyo ama naqdida videos ah. Ujeedada YouTube waxaa shaki la'aan hoorto laakiin websites kale iyo barnaamijyada software siiyaan user leh xarunta si loo hubiyo in ay jecel yihiin videos for soo bixi views mustaqbalka iyo weliba. Ma aha website a madadaalada, iyadoo ay u saamaxdo xirfadlayaasha si loo helo mowduucyo ay doonayaan sida videos on mawduuc kasta oo adduunka ah waxaa laga heli karaa YouTube aan wax dhibaato ah. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican nidaamka of video maraya RTMPDump macnayn doonaan si user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira iyo sidoo kale helo gobolka goobaha tahay iyadoo aan wax lacag xitaa haba yaratee hal. Geedi socodka ayaa sidoo kale la socoto sawirada la xiriira si ay u hubiyaan in user helo aragti cad oo ku saabsan waxa uu la arrintan la xiriira sameeyo doonaa:
Xidhmada waxaa ku qalab barnaamijka lagala soo bixi karaa website-ka ah ee software-ka. Haddii kale user sidoo kale hubin karaa in in search engine Google waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bixi barnaamijka waxa la baadhay, ka dib:
Barnaamijka waxaa lagala soo bixi qaab of file zip ah si user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in files zip waxaa markaas soo saaro in ay sii wadi arrintan la xiriira:
Marka saaridda ayaa lagu samayn buuxa waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in barnaamijka software-ka waxaa maamula si ay u shaqo ka bilowdey.
Muuqaalka YouTube in ay tahay in la soo bixi waa in la ciyaaray halka barnaamijka ka shaqeeya ee asalka ah:
User arki doonaa barnaamijka sameynta xiriir ah dhex degdeg ah amarka iyo sida geeyo la sameeyo video ah ayaa waxaa sidoo kale soo bixi by barnaamijkan oo hubiyo in hannaanka dhamaado mar video ayaa lagala soo bixi dhigi doonaa.
Video doono ka dibna la kaydiyaa meel la doonayo sida ikhtiyaar u user iyo inuu u baahan yahay si loo hubiyo in waxa la soo ciyaaray oo isticmaalaya ciyaaryahan ku haboon in lagu xiro gal kombiyuutarka, sida caarada oo dheeraad ah waa in la ogaadaa in warbaahinta VLC ah ciyaaryahanka lagu talinayaa taas oo dhan qaabab ay si sahlan oo kaamilka ah.
Dhegayso YouTube la TunesGo
TunesGo waxa uu ka dhigayaa suurto gal u user si loo hubiyo in video YouTube la soo bixi oo intaa ku daray in barnaamijka aan arin kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in soo socda waa nidaamka:
Barnaamijka waxaa si lagala soo bixi oo lagu rakibay ka www.wondershare.com/tunesgo/ in ay sii wadi arrintan la xiriira:
Jidka ku haboon waxaa ka dibna in la raaco si loo hubiyo in bogga soo socda u muuqataa. Jidka waa homepage> YouTube in Lugood,
URL YouTube waxaa markaas in la dhejiyo si loo hubiyo in in Falanqeynta video ay u muuqataa ka dibna badhanka download waa in la sii adkeeyey si aad u hesho habka sameeyo:
> Resource > YouTube > Sida loo Dhegayso YouTube Online, offline iyo Software